Weftigii ka socday hay'ada khaliifa foundation ee Imaaraadka Carabta oo ay wehelinayeen safiirka Somaliland u fadhiya dalka imaaraad Amb. Baashe Cawil iyo xubno wasiiro ah oo deeqo kala duwan gaadhsiiyey deegaano hoos yimaada gobolka Gabiley. - Haldoornews
Gabiley (Haldoornews ) Weftigan imaaraadka uga yimid sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen xaalada Abaareed ee saamaysay qaybo ka mida gobolada Somaliland oo uu hogaaminaayey Safiirka Somaliland u fadhiya Imaaraadka Carabta in muddo ahna ku sugnaa dalka una kuurgalay xaalada guud ee abaaraha ayaa maanta waxay u kicitimeen deegaamo hoos yimaada gobolka gabiley, waxaana safarkan ku wehelinaayey Wasiiro ka mida xukuumada iyo Gudoomiyaha Gobolka Gabiley.
waxaanay ugu horayn boqdeen weftigu deegaamada Allaybaday iyo Dameero boob, oo maamul ahaan ka tirsan gobolka gabiley halkaasna waxay gaadhsiiyeen deeqo isugu jira, Agab ka kooban mishiinada ceelasha biyaha oo ay ugu talogaleen in lagaga shaqaysiiyo ceelka Dameero boob oo isagu fadhiyey mudooyinkii u danbeeyey, waxa kale oo ay geeyeen halkaas booyado biyo ah iyo Raashin iyo beeb loogu talogalay ceelka, kuwaas oo ay ugu talogashay hay’adda khaliifa foundation dadka abaaruhu sameeyeen.
Waxaa halkaa ka hadlay Masuuliyiin dhawra oo hadalka iska daba maray, Gudoomiyaha gobolka gabiley Xamse Maxamed Cabdi oo ugu horayn ka Hadley goobtii deeqda lagu bixinayey, ayaa u mahad naqayo hay’ada khaliifa foundation oo deeqdii ugu horaysay soo gaadhsiisay dadka abaaruhu saameeyeen ee gobolka gabiley.
Wasiirka wasaarada diinta iyo Awqaafta sheekh khaliil oo isna si faahfaahsan ugu waramay deeqdani ay hay’ada khliifa foundation ugu tala gashay inay gaadhsiiso dadka ay abaaruhu saameyeen ayaa sheegay in ay keeneen mishiin iyo beeb loogu talagalay in lagu dayactiro ceel biyooodka dameero boob iyo caano loogu talagalay in la siiyo ilaa shan boqol oo qoys, Sidoo kalena waxa uu xusay inay wadaan toban booyadood oo biyaa.
Wasiirka wasaarada maaliyada marwo Samsam Cabdi Aadan oo goobta ka hadashay ayaa aad ugu mahad celisay safiirka somaliland u fadhiya imaraadka iyo hay”adda kha’iifa foundation, Waxaanay xustay in ceelka dameero boob uu yahay ceel biyo badan oo in badana dadka anfacaya maantana ay guul u tahay cid kasta oo ka mida deegaanka iyo inta ka agdhaw.
Wasiirada wasaaradaha deegaanka,warfaafinta, iyo agaasimaha wasaarada biyaha ayaa iyaguna dhamaantood bogaadin iyo mahadnaq u soo jeediyey Ambassador Baashe Cawil Cumar iyo hay’ada khaliifa foundation ee deeqdan kala duwan soo gaadhiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Maxamed Yuusuf Cige oo ku hadlaayey afka odayaasha deegaanka alleybaday ayaa sheegay in deeqdan maanta lasoo gaadhsiiyey ay tahay mid dadku u baahnayeen isla markaana ay aad ugu mahad naqayaan cidkasta oo ka shaqaysay sidii dadkan abaaruhu saameeyeen wax loosoo gaadhsiin lahaa.
Safiirka somaliland u fadhiya dalka imaaraadka Carabta, Amb Bbaashe oo isna goobta ka Hadley ayaa aad u bogaadiyey ha’yadda khaliifa foundation sida wanaagsan ee ay uga soo jawaabeen baaqii madaxweynaha ee taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen.
Amb baashe cawil ayaa ka dhawaajiyey inay jiraan mashaariico kale oo ay hay’ada khaliifa foundation ugu tala gashay inay wax ku gaadhsiiso dadka ay abaaruhu wax yeeleeyeen ee ku kala dhaqan deegaanada kala duwan ee dalka.
Ugu danbayntii waxa goobta ka Hadlay masuulkii hogaaminaayey hay’ada khaliifa foundation Jumca Khamiis, oo sheegay in hay’ada khaliifa ay ka shaqayso caawinta dadka baahan, isaga oo xusay in deeqo badan oo kala duwan ay gaadhsiin doonaan guud ahaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee dalka oo dhan.
Maaha markii ugu horaysay ee hay’ada khaliifa foundation ay dalka timaado isla markaana ay gacan ka gaysato caawinta dadka tabaalaysan balse hore ayey dalka dhowr jeer u yimaadeen iyagoo uu hogaaminayo Amb baashe cawil waxanay hore dayactir iyo dhisme uga gaysteen ceel biyoodyo badan iyagoo mashaarico kala duwan dalka ka fuliyey.
Musharax Jamaal Cali Xuseen oo Si Aqooni ku Dheehantahay uga Hadlay Xaalada Dalka, Dilkii Taliye Casayr iyo Shaqaaqooyinkii Somaliland ka Dhacay.